LG G8 ThinQ Score Igwefoto Igwefoto dị ala na DxOMark | Gam akporosis
Otu n'ime ọkọlọtọ ndị malitere na nkeji iri na ise, mana eleghara ya anya n'ihi na ọ dọtaghị ọtụtụ anya, bụ LG G8 ThinQ. Ọ bụrụ n’ikpebiela ma ọ bụrụ na ị ga-azụ ya ikekwe maka na ị maghị ka igwefoto si dị mma, nyocha igwefoto DxOMark ga-enyere gị aka ịme mkpebi ahụ.
LG D8 ThinQ enyochala DxOMark na nyocha ya bu n’ile anya. Ihe akara nke ọnụahịa ahụ nwetara adịghị mma, na-eche na ọ bụ ọkọlọtọ nke arụmọrụ kacha elu yana na a na-atụ anya ọtụtụ ihe n'aka ya na ngalaba a.
Versiondị ha nyochaa bụ nke nwere ntọala igwefoto atọ, nke nwere ihe mmetụta 12 MP (f / 1.5) isi, 16 MP (f / 1.9) ihe ntanetị na mbara igwe na 12 MP (f / 2.4) lens telephoto. Ka anyi ghara ichefu na enwekwara uzo abuo nke nwere igwe onyonyo abuo (nke erere na United States), nke enweghi oghere telephoto maka mbughari anya.
LG G8 ThinQ akara na DxOMark
Na nkọwa, LG G8 ThinQ jisiri ike deba akara DxOMark zuru oke nke ihe 96. Ekere ya n'ime 99 maka foto yana 89 maka ndekọ vidiyo. Na ọkwa, G8 ThinQ dị na 21st, n'elu OnePlus 6 nke ejiri ya na n'okpuru Xiaomi Mi MIX 2S.
DxOMark na-ekwu na LG emeela ka autofocus nke ọhụrụ ngwaahịa ya kacha mma. Ọ dị ugbu a karịa na LG V40 ThinQ. Ha tokwara ya maka njikwa nke ikpughe ya, ọbụlagodi na ọnọdụ a na-enwu enwu, na ụcha ya na -emepụta ma n'ime ụlọ ma n'èzí. Otú ọ dị, ọnụnọ nke arịa (ihe ndị pụtara ìhè na foto ndị na-adịghị na ebe ahụ n'ezie) bụ ihe na-ewetu akara gị. Ọnụ ọgụgụ ekwentị dị ala na Bokeh na mgbe ebupụtara ya, nke na-eme ka ọ dị ala.
Maka vidiyo, LG G8 ThinQ na-ejide ikpughe na mmeputakwa agba nke ọma. Ọ na-enwetakwa ogo na nkwụsi ike. Agbanyeghị, autofocus na-ata ahụhụ, ọkachasị obere ọkụ. Enwekwara mmetụta jelii a na-ahụ anya na "mgbanwe ọkụ na-ahụ anya na ọnọdụ ije."
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » LG G8 ThinQ na-enweta akara igwefoto dị ala na DxOMark